Izinhlobo ezinhlanu zezibuko zokuqedela itafula lakho | Bezzia
Izinhlobo ezi-5 zezibuko zokuqedela itafula lakho
UMaria vazquez | 27/04/2021 12:00 | Ukupheka
Zazi ngezindaba zezigaba zeZara Home ezibhekiswe kuzo gqoka itafula lethu kuhlale kungumsebenzi omuhle. Kuyingozi futhi ngoba, ngubani ongalingwa ukuba athenge izinto angazidingi ngoba nje zizinhle? Le yindlela esizizwe ngayo lapho sihamba ingilazi kusuka enkampanini yaseSpain ifuna izibuko zokuhlobisa itafula lethu.
Asidlulanga esigabeni sifuna ingilazi enhle kakhulu, hhayi namuhla! Sikwenzile ukukhombisa indlela izinhlobo ezahlukahlukene zezibuko ongagqoka ngayo itafula lakho. Ngamunye wabo uzoletha umlingiswa ohlukile kukho: i-classic, i-minimalist, i-bohemian, isibindi ... Thola izinhlobo ezi-5 zezibuko nathi bese ukhetha eyakho noma eyakho.
1 Izibuko zakudala
3 I-crystal yeBohemian
5 Imiklamo ehlotshisiwe
Kunezingilazi ebeziyingxenye yezindlu zethu amashumi eminyaka nokuthi ngenxa yalesi sizathu zifaka isandla ekusenzeni sizizwe sisekhaya yize sikude naso. Sikhuluma ngezibuko ze ingilazi ecwebezelayo ecwebezelayo enezinhlaka ezihlangene. Kepha akuzona kuphela ezakudala; Lezo ezenziwe ngengilazi ezinomklamo olula futhi omuhle, njengalezo eziboniswe esithombeni esingenhla, zihlala ziphumelela etafuleni, noma ngabe yisiphi isitayela setafula. Eziningi zalezi zibuko zingumshini wokuwasha izitsha uphephile, kepha akuzona zonke ezingenakugcinwa ngemicrowave, gcina lokho engqondweni!
Imiklamo enesando, njengezici ezithile, ithandwa kakhulu emakhaya ethu, ithatha indawo enhle ematafuleni ethu nsuku zonke. Okungajwayelekile kakhulu, noma kunjalo, yilabo abane idayimane noma umphumela omile okwembali. Imiklamo ebanzi ebekelwe emakhaya amaningi ngezikhathi ezikhethekile ngoba zengeza ubuhle ematafuleni ethu.
Ingilazi ye- "Bohemian" iyabonakala ngeyayo ukwenza izinto obala ngokweqile, ukukhanya kanye nokumelana. Lezi zibuko, ezinemiklamo eqondile kanye nemiklamo eyindilinga, ziletha ubuhle nobuciko etafuleni, kuzenze zibe enye yezinqumo ezingcono kakhulu zokugqoka amatafula amancane ngokuhambisana nezindwangu zemvelo. Ingabe ufuna ukuhlanganisa okuhle? Phakathi kwezinhlobo zezibuko, izingilazi ze-bohemian ezinomphetho wegolide onqenqemeni mhlawumbe zihle kakhulu.
Iningi lalezi zibuko aziphephile i-microwave. Futhi, labo abanonqenqema lwegolide abavamile ukuthi umshini wokuwasha izitsha uphephe ngakho-ke kuzodingeka uwageze ngesandla. Isici esisebenzisekayo esingakusiza ukufaka ibhalansi kokukodwa noma kokunye.
Ngabe ufuna ukunikeza ukuthintana kwe-bohemian nokumibalabala etafuleni? Ukukhokha lawo mathebula kusuka ebuntwaneni bakho lapho i-amber duralex tableware yayiyi-protagonist? Izibuko zengilazi ezinemibala ezivela eZara Home zizokuvumela ukuthi wenze njalo. Uzozithola zombili zibushelelezi futhi zinama-reliefs ngendlela yolayini namaqabunga naku-a anhlobonhlobo imibala: ophuzi, oluhlaza, obhemayo, opinki, onsomi ...
Eziningi zazo zenziwe ngengilazi. Noma kunjalo, ungathola futhi kulesi sigaba izingilazi ze-acrylic, yenziwe nge-styrene-acrylonitrile copolymer. Into ebenza bangawalungeli ama-microwave nama-washwasher.
Izibuko ezihlotshisiwe zithatha isikhala esincane kakhulu kukhathalogi yengilazi yaseZata Home. Ngokuvamile ziyizitsha ezibushelelezi ezine- Ukulandela ngesimo samaqabunga, izimbali, izimvemvane noma ojekamanzi. Isinqumo esimhlophe yiso esivame kakhulu, kepha futhi ungathola imiklamo emibalabala, njengathi, ezokwenza ubuyele kwezinye izikhathi. Ngoba kunesikhathi lapho izibuko zalolu hlobo zanikezwa lapho kuthengwa imikhiqizo ethile futhi kunesikhala emakhabetheni cishe kuzo zonke izindlu.
Awuqinisekile ukuthi iyiphi ingilazi ongayikhetha? Qala ngokuchaza isitayela sengilazi. Zibuze ukuthi ngabe ukhetha ingilazi elula evumelana namatafula ezitayela ezihluke kakhulu noma ufuna izingcezu ezihlukile eziba ngabalingisi bayo bese umaka isitayela sakho. Ngemuva kwalokho, uma isitayela sesichaziwe, lahla amamodeli angahambisani nalawo izici ezingokoqobo ezibalulekile kwakho. Uma ufuna ukuthi zombili zihlanze imishini yokuwasha izitsha ne-microwave, uhlu luzofinyezwa kakhulu. Manje, mane ukhethe eyodwa oyithanda kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ukupheka » Izinhlobo ezi-5 zezibuko zokuqedela itafula lakho
AmaBridgertons: Isikhathi Sesibili Manje Sesiqinisekisiwe!
Ama-croquette amazambane amnandi noshizi